Professional Straps Pointe ဖိနပ်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်စက်ရုံ - Fitdance ဘဲလေးစက်ရုံ။
နေအိမ် > Dance ဖိနပ် Dance ဖိနပ် > Professional ကြိုးကြိုး Pointe ဖိနပ်
Professional ကြိုးကြိုး Pointe ဖိနပ်
New Style Soft Dance ဇာအမျိုးသမီးဘဲလေးအပြားဖိနပ်ဘဲလေးဖိနပ်ဘဲလေးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်အွန်လိုင်းဆိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မြင့်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစတိုင်သစ်အကော့ဇာအမျိုးသမီးများဘဲလေးအပြားဖိနပ်ဘဲလေးဖိနပ်ဘဲလေး။ Ballerina ဝတ်စုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်တရုတ်စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး wear ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အ ၀ တ်အထည်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းများကိုအထူးပြုကာတရုတ်အကနှင့်ဖျော်ဖြေသောကလေးအဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၌နာမည်ကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာဘဲလေးတက်တူး၊ ဘဲလေးအကျီင်္များ၊ ဘဲလေးအကများ၊ နှင့်ဘဲလေးဖိနပ်, ဘဲလေးတင်းနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမြောက်အမေရိက၊ ရုရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားစသည့်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများစွာသို့တင်ပို့သည်။
၀ န်ထမ်း ၂၀၀ ခန့်ရှိသောဂွမ်ဒေါင်းနှင့်ဟူဘီးတွင်ထုတ်လုပ်မှုစခန်း ၂ ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်မြင့်မားသောသမာဓိရှိခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုအာမခံပေးနိုင်သည့်သာလွန်သောဒီဇိုင်နာများ၊ မန်နေဂျာများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများပါ ၀ င်သည်။
ပစ္စည်းအပေါ် - Satin၊ နံရံ - အရည်အသွေးမြင့်ပတ္တူ၊ Outsole - မြင့်သော Density Flower Paper
သင်္ဘောတင်နည်းလမ်းပံ့ပိုးမှုစင်တာ Express ·ပင်လယ်ကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး·ကုန်းလမ်းသဘောင်္·လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဘဲလေးဖိနပ်၏ After-sales service
သူသည် ဦး တည်ရာသို့ရောက်သောအခါ၊ သင့်ထံငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုသတိပေးရန်သင့်အားထပ်မံဆက်သွယ်ပါမည်။
သင်လက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပြproblemနာရှိပါကပြofနာ၏ပြင်းထန်မှု၊ အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျော်ကြေးများအရကျွန်ုပ်တို့နှင့်ညှိနှိုင်းပါမည်။
၏မေးခွန်း & အဘဲလေးဖိနပ်
Q1. သင်ထုတ်လုပ်သူလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
A1.We သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကများ၊ ကလေးတွေအဝတ်အထည်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအ ၀ တ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။ designing.manufacturing နှင့် marketing တွင် ၁၇ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်ပြီးပြည့်စုံသောအသင်းများရှိသည်။
A2. နမူနာသည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နမူနာအခကြေးငွေကိုလက်ကားဈေးနှစ်ဆဖြင့်ကောက်ခံပါမည်။ သို့သော်သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာယူပါကနမူနာကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်အမ်းပါမည်။
A3.You မှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းများကိုသင်ပေးပို့နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင့်ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးပို့ပါမည်။ ကလေးအရွယ်အစားအ ၀ တ်အစားများ၏အရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ပေးသည်။ အရွယ်အစားဇယားမှသင်မှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြproblemနာရှိပါက၊ အရွယ်၊ အလေးချိန်နှင့်အလေးချိန်ကိုသင်ပြောပြနိုင်ပြီးသင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏တံဆိပ်များ / တံဆိပ်များကို ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုတွင်ထားနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်ကြိုဆိုသည်။ သင့်တွင်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရှိပါကအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
A5.1) အားလုံးထုတ်ကုန် packing.2 မတိုင်မီတင်းကြပ်စွာအရည်အသွေးစစ်ဆေးပြီးလိမ့်မည်။ ) Al ထုတ်ကုန်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီကောင်းစွာထုပ်ပိုးလိမ့်မည်။ ၃။ မကျေနပ်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တုန့်ပြန်မှုနှင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုရရှိလိမ့်မည်။
Q6. မည်သည့်အာမခံချက်နှင့်အာမခံချက်ကိုသင်၏ကလေးတွေပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်နိုင်ပါသလဲ။
A6.We သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စည်းများဖြင့်ရောင်းချသည်။ မပို့မီကျွန်ုပ်တို့၏ Q&C ၀ န်ထမ်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးပျက်စီးယိုယွင်းနေသောဝတ်စုံများကိုဘယ်တော့မှမပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ၀ တ်စုံတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။
Hot Tags: Professional Straps Pointe ဖိနပ်၊ ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူများ၊ တရုတ်စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ နိမ့်သောစျေးနှုန်းပေးသွင်းသူများ
Canvas ဇာ Splice ဘဲလေးဖိနပ်
သားရေ ဦး ခေါင်းဘဲလေးဖိနပ်
Professional က Canvas ဘဲလေးဖိနပ် -1700